Dufcadii Ugu Horeesay Oo Darajada Master-ka Ku Diyaarisay Jaamacada Somalia Ee Magaalada Muqdisho
1991-dii kadib dagaaladii ahliga ahaa ee kadhacay dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeesay waxaa jaamacada Somalia kaqalin jabiyay dufcadii ugu horeesay arday diyaarisay shahaadada Master-ka.
Munaasabad weyn oo kadhacday howlka weyn ee jaamacada Somalia ayaa waxaa kahadlay madaxa jaamacada Yaxya Cali Ibraahim, waxaana uu sheegay in dhacdadaan ay tahay mid taariikhi ah isla markaasna ay 27 arday wadanka gudihisia ku diyaariyeen darajada Master-ka iyagoon dibadda aadin taasna ay ku timid dadaal ay sameeyeen aqoonyahano soomaaliyeed oo isku xilqaamay ineey haqab tiraan baahida ardayda Soomaaliyeed.
Dhanka kale maamulaha wasaarada tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf oo isna goobta kahadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay inuu ka qeyb galo munaasabad ay arday soomaaliyeed lagu gudoonsiinayo shahaadada Master-ka, sidoo kale waxa uu amaan balaaran usoo jeediyay maamulka iyo macalimiinta jaamacada Somalia, kuwaasoo dadaal dheeraad ah ku bixiyay in arday soomaliyed ay gudaha dalkooda ku diyaariyaan darajada master-ka iyadoo wadanka uu kujiro xaalad dagaal.
waxa uuna yiri: “waan ku faaneeynaa waxayna noo muujiyeen in soomaalida ay karti uleeyihiin ineey wax walbo sameeyaan iyagoo naftooda ku tiirsan, dhibaatada aan hada kujirnana waxaan kaga bixi karnaa aqoon iyo wax barasho”.
Yuusuf ayaa ardayda qalinjabisay ku booriyay ineey sii wataan waxbarashadooda ilaa ay ka gaaraan darajada D-da waxa uuna ubalan qaaday ineey garab taaganyihiin oo ay garab siin doonaan ilaa ay kagaraan hadafkooda.
Maryam Cariif Qaasim ahna gudoomiye ku xigeenka jaamacada Somalia ayaa iyana dhankeeda waxay sheegtay in qalin jabinta ardaydan diyaarisay shahaada Master-ka ay soomaalida dibadda kunool ku dhiirogalineyso ineey kusoo laabtaan wadankooda isla markaasna ay dareemayaan in wadanka ay rajo kasoo bidhaameyso marka laga soo tago dagaalada iyo dhibaatada ay warbaahinta ka gudbiyaan.
Waxaa xusid in ardayda Soomaaliyeed badanaa ay shahaadooyinka Master-ka Iyo DR-da kusoo diyaariyaan dibadda balse 27-kan arday ee hada darajada Master-ka Kudiyaariyay gudaha dalka ayaa dhiirogalin unoqoneysa ardayda kale ee dooneeysa ineey dibadda kusoo diyaariyaan waxbarashada sare.